အဲလက်စ်မာတီနက်ဇ်ကသူသည် Univision Noticias နှင့် Audio Mixing ၏အနာဂတ်တွင်သူ၏အခန်းကဏ္Discကိုဆွေးနွေးခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဲလက်စ် Martinez Univision NOTICIAS နှင့်အသံရောနှောအနာဂတ်မှာမိမိအခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေး
A: ကျနော်အကြမ်းဖျင်းခုနစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်င့်ဘယ်မှာ Univision NOTICIAS, Univision ကွန်ယက်၏သတင်းကိုတောင်ပံ, အဘို့အသံအော်ပရေတာပေါ့။ ငါအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကွန်ယက်ကိုသတင်းရှိုးပွဲကိုဖုံးလွှမ်း။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည် primer Impacto, Noticiero Univision, Noticiero Univision en UniMás နှင့် Noticiero Univision Edicion Nocturna။ ငါသညျလညျးအခွားသူမြားစှာအကြားယင်းကဲ့သို့ပြည်ထောင်စုမိန့်ခွန်းအမေရိကန်ပြည်နယ်အဖြစ်ပိုကြီးအထူးသတင်းဖြစ်ရပ်များ, အမေရိကန်နှင့်လက်တင်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲလွှမ်းခြုံနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှပုပ်ရဟန်းမင်းလည်ပတ်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
Q: သင်ထုတ်လွှင့်အသံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ရခဲ့တာလဲ အဘယ်အရာကိုသင်ဤနားလည်သဘောပေါက်လုပ်သင်ယူလိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကိုခဲ့သလဲ
A: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသံ၏ငါ့မေတ္တာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီအချိန်ဇယားနဲ့ကျနော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းအကြောင်းအရာ၏ထုတ်လွှင့်သို့ရတယ်။ ငါဖိအားအောက်မှာအလုပ်လုပ်ကိုချစ်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားတစ်ဖဲ့သတင်းအဖြစ်အပျက်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်များအတွက်ဒီမှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါ့အသင်းကိုအမြဲတကယ်ကဤအခြေအနေတွေမှာထွန်းလင်းဟန်; ငါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ငါသည်လည်းငါပိုကြီးတဲ့ပရိသတ်အတွက်ရောထွေးချင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်လွှင့်ဖို့ gravitated ။ In-စတူဒီယိုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲကနေသွားကြဖို့ကွန်ယက်အဆင့်မှာတိုးတက်မှုအလားအလာကြီးမားသည်, သင်တို့သည်ဤမျှ US မှာအများအပြားနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဤမျှလောက်များစွာသောအခြားနိုင်ငံများသို့ simulcast မြင်ကွန်ယက်ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့မရနိုင်ပါ။
ငါဒေသခံတစ်ဦးကရေဒီယိုဘူတာရုံမှာ DJ သမားခဲ့တဲ့သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘို့အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါသို့သော်အသံသို့ငါ၏အ foray ပြန်အထက်တန်းကျောင်းမှစတငျ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်မအများအားဖြင့်ပွဲ၏အတွင်းနှင့်ထွက်စံချိန်သေတ္တာ lugging, $ 50 တညဉ့်ကို လုပ်. , အဖြစ်အပျက်တွေကိုစဉ်အတွင်းသူတို့နှင့်အတူတွဲလွဲဆွဲထားတယ်။ အဲဒီအသံနားထောင် '' စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်သူတို့ရဲ့လမ်းကျော်ရှိပါတယ်သောတန်ခိုးတော်ကိုမြင်လျှင်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစှဲခဲ့သညျ။ ငါစာရွက်အတူတူထားခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူချင်တယ်။ မကြာခင်မှာပဲပြီးနောက်, ငါလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အဘို့အကြှနျုပျကို signal ကိုစီးဆင်းမှုဆုံးမသွန်သင်သူကား, ဒေသခံကလပ်ပိုင်ရှင်နဲ့အလုပ်သင်စတင်ရောမွှေဖို့ဘယ်လိုများနှင့် circuitry မလမ်းကိုပြုမူပင် "ဘာကြောင့်" ။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှခညျြအနှောရောစပ်အသံရောစပ်ခြင်းနှင့်စနစ်တကျလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များအတွက်ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာခဲ။ ဒါဟာငါဖဲကြိုးဖြတ်ဒုတိယကောလိပ်ဒီဂရီဘို့သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, ဒီအချိန်အသံဖိုင်အာရုံစိုက်ကြောင်းတစ်ဝက်ဒီအလုပ်သင်မှတဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မေး: Univision ရန်သင့်အားအဘယျသို့ဦးတည်သွားစေ?
A: တကယ် serendipitous ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအလုပ်လုပ်ခဲ့သည် လွန်စွာလိုလားသောကျောင်းသားတစ်ဦးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် 's Pro ကို Tools များလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးကျောင်း, သူတို့အသံအော်ပရေတာလက်မှတ်သို့ကြည့်ဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့ Univision တနေ့တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့ကဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြစ်ဖို့နည်းပြဆရာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဘာသာစကားနှစ်မျိုးခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသော On-site ကိုအကြံပေးခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ခေါ်ဆိုမှုငါ့ဆီသို့ရောက် လာ. ။ သူတို့ကတစ်ဦးခရီးစဉ်အဘို့မိမိတို့စတူဒီယိုမှငါ့ကိုမဖိတ်ခေါ်ခဲ့, ငါ set ကိုအပေါ်အစာရှောင်ခြင်းအရှိန်အဟုန်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ သူတို့ကပဲဒါကြောင့်အသစ်တခုအသံအော်ပရေတာကိုရှာဖွေနေကြပြီမှဖြစ်ပျက်, ငါအခွင့်အလမ်းမှာခုန်တက်။
မေး: ခင်ဗျားဘယ်လိုအသံနည်းပညာများမြင်ကြရှိသည်, အသံဖမ်းရောထွေးနှင့်ကိုအပ်သည်လမ်း, သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျော်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ? ဒီပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်သင်အလုပ်မလုပ်လမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သလဲ
A: အသံထဲမှာစတင်လာတဲ့အခါကျနော်တို့နေဆဲ tape- သုံးပြီးခဲ့ကြသည်နှင့်အ reel-to-reel, ဒါကြောင့်ငါကအသံနည်းပညာလွန်စွာပြောင်းလဲပြီဟုပြောဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်လို့ထင်ပါတယ်။ Analog စအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထံမှဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Non-linear တည်းဖြတ်ရေးအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ဖို့တိုးတက်မှုငါသိမြင်င့်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးရောထွေးနှင့်တည်းဖြတ်ရန်ချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့တစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖွင့်ပါကတည်းဖြတ်စက္ကန့်အတွင်းမာစတာကပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုယခုမိနစ်အတွင်းမဆိုသက်ဆိုင်ရာသတင်းကို update များနှင့်လာမည့်အချိန်ဇုန်အပေါ်နောက်တစ်နေ့ထုတ်လွှင်ထိုသို့အဆင်သင့်ရှိသည်ဖို့နိုင်တော့မည်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါပေးပို့ခြမ်းတွင်လက်ရှိထုတ်လွှင့်စံမရှိတော့တိကျမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတွေ့ဖူးတဲ့အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကိုယခုကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အတွက်စာသူ On-demand ပရိတ်သတ်များအတွက်ပိုပြီးဖော်စပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ format ကိုလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်တစ်ဦးစံအတိုင်းဤလိုက်လျောညီထွေမြော်။ ဂီတ MP3 ကို formats မှ CD ကိုအရည်အသွေးကနေရွှေ့ပြောင်းရသောလမ်းကိုဆင်တူဒါကြောင့်လည်းအတူတူပင်ထုံးစံ၌တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။ audio အင်ဂျင်နီယာများတစ်လူမှုမီဒီယာကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေရှငျနထေိုငျ streaming တစ်စမတ်ဖုန်းမှ 5.1 နှင့်မိုနိုပစ်ခတ်ရန်စပီကာအတွက်အိမ်တွင်းကဇာတ်ရုံ Setup မှစာက၎င်း၏ကြည့်ရှု၏စိန်ခေါ်မှုကိုကျော်လွှားရန်ရပါလိမ့်မယ်။ အခြို့သောတာဝန်များကိုကို automation လည်းပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
A: အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုအရာအားလုံးကို၏ရုတ်တရက်, ထိုသို့ပေးပို့ရဲ့အရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်တစ်ခုခုထုတ်လွှင့်သောအခါဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအချက်ပြအရှုံးနှင့်ချုံ့၏ပမာဏကိုလာမည့်နှစ်များတွင်ကြီးမားသောအချက်ဖြစ်သွားသည်။ ။ ထောငျ့အရာအားလုံးလူမှုမီဒီယာကိုချွတ်အခြေစိုက်နှင့်မည်သို့လျင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအကြောင်းကြားရန် On-ဝေဟင်လာနိုငျပါလိမ့်မည်။ ကိုယ့်ကျနော်တို့လူမှုမီဒီယာနှင့်အလိုအလျောက်ဖို့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်ဖော်စပ်၏ artform ဆုံးရှုံးပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်။ သငျသညျအခြို့သောအသံ protocols များအလိုအလျောက်အခါ, သငျသညျထိလုသောငါတို့ပြပွဲဒါ engulfing နှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုရှုံးသည်။ ကျွန်မအပေါ်-ဝေဟင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်များ၏စိတ်ခံစားမှုစံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်နိမ်များနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေဦးဆောင်လမ်းပြကြပြီးတဦးတည်းစည်းလုံးပြပွဲစောင့်ကြည့်သော်လည်းအဖြစ်သူတို့ကိုခံစားရရှိနိုင်ပါသည် - အတူတကွရိုက်ချိုးကျပန်းပုံပြင်တွေမယ့်စည်း။ ဤသည်သာသင့်လျော် dynamic range ကိုအတွင်းအမှန်တကယ်ရောစပ်နှင့်အတူအောင်မြင်နေသည်။
ဖြေအများဆုံးပြပွဲသည်ငါညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူထိုင်သူထုတ်လုပ်မှု၏ကျန်တွေနဲ့ဖန်တီး rundown မှတဆင့်သွားပါ။ ပြပွဲရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, ငါထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြမ်းပြင်မန်နေဂျာနှင့်တွေ့ဆုံရန်သွားနှင့်ငါလိုအပ်သည့် MICS နှင့် combo သူ့ကိုပြောပြများနှင့်ပြပွဲတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအစိတ်အပိုင်းအဘို့အဘယ်သို့တောင်းမည်ပါလိမ့်မယ်။ မည်မျှဧည့်သည်များ, ဘာသာပြန်ချက်, လိုအပ်ချက်များကို, etc ထိုအခါအကြှနျုပျသတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးရန်နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်: အရာအားလုံးကျနော်တို့ပါပြီဘယ်လောက်လှုပ်ရှားမှုချွတ်အခြေစိုက်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဂြိုဟ်တု feeds ။ သူတို့နှင့်အဆင့်အရည်အသွေးထုတ်လွှင့်နေကြသည်ဒါကြောင့်အမှတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Calrec consoles စတစျခုသို့တိုက်ရိုက် feeds တွေကို patch နှင့်လိုအပ်သကဲ့သို့, ထိုသူတို့ကိုကို clean up ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးစတူဒီယိုနှင့်မဆိုလိုအပ်သောပြင်ပအရင်းအမြစ်နှင့်ခေါက်ပြန်ရောသမမွှေများနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးထူထောင်ရန်။ ဤသည်မှာလည်းဆိုပါတယ်ပြပွဲအတှကျလိုအပျမဆိုရောနှောအနုတ်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
မေး: သင်အဘယ်အရာ Calrec consoles စကိုအသုံးပြုနိုင်သလဲ? ပိုမိုလွယ်ကူသည်သင်၏အလုပ်လုပ်ဆို features တွေရှိပါသလား, သင်ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကူညီ, သင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအကျိုးအမြတ်သို့မဟုတ်သင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်?
တစ်ဦးက: လောလောဆယ်ငါ Calrec အာတေမိကိုအသုံးပြုဖို့ 48-fader ဘောင်အဖြစ်ကို set up, ဒါပေမယ့်ငါအမှန်တကယ်အာလဖအပေါ်ထုတ်လွှင့်အသံရောနှောစတင်ခဲ့သည်။ Univision လည်းလက်ရှိတွင် Apollo ဖြန့်ချထားပေမယ့်ငါချစ်ရာသခင်အာတေမိကိုပိုနှစ်သက်နှင့်သေးငယ်ဘဏ်ဍာများအတွက် Summa console ကို။
အဆိုပါ Calrec အာတေမိအပေါ်ပြင်ဆင်ရန်မှာနဲ့ routing ၏လွယ်ကူဂိမ်း changer ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ console ကိုငါ့ကိုပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအရာအားလုံးလုပ်ဖို့ခွင့်ပြု, ငါ့ရောနှောအနေအထား၏နှစ်သိမ့်ကနေ။ ပြည်တွင်းရေးလမ်းကြောင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ငါ့ကိုအချိန်အများကြီးချွေနေချိန်တွင်ဒါဟာလုံးဝ, patch ကိုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မဆိုအမျိုးအစားသွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ အခါတိုင်းလိုအပ်သော, ငါသည်အလျင်အမြန်လမ်းကြောင်းနိုင်ဒါရိုက်တာလိုအပ်ပါတယ်ငါရောနှောငါ့အာရုံကိုစွန့်ဖြစ်ကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဘာမှ။
အသံ: ထို့နောက်အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ရောနှောအဖြစ်ကျနော်တို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်စင်ကြယ် signal ကိုအကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်များကိုဖြေလျှော့ပေးနိုင်ပုံကိုမေ့လျော့။ အဆိုပါ console ကိုသူ့ဟာသူအစဉ်အမြဲငါအပေါ်အလုပ်မလုပ်ဖို့အပျော်အပါးခဲ့ဖူးတဲ့အရှင်းလင်း console ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆူညံသံကြမ်းပြင်သည် EQ နှင့်တွန်းမှကျေးဇူးတင်စကားကြောင့် imperceptible င်ဒါနိမ့်သည်။ မရှိမလိုချင်တဲ့အရောင်သို့မဟုတ်သဟဇာတရဲ့အဲဒါကိုအသံဘယ်လောက်သန့်ရှင်းတဲ့အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဒါဟာဒြပ်စင်ရုံရောနှောထိုင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ရောနှောအစားအသံအာကာသများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်၏ခွင့်ပြုပါတယ်။
မေး: သင် Calrec consoles စသင်တစ်ဦးထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်း facing ခဲ့ကြသည်ပြဿနာတစ်ခုခုဖြေရှင်းကူညီပေးခဲ့တယ်တဲ့အခါအချိန်စဉ်းစားနိုင်သလား?
A: အချိန်ကွဲပြားခြားနားသောထိန်းချုပ်မှုအခန်းပေါင်းလိုအပ်သောအရာကျနော်တို့မျိုးစုံစတူဒီယိုကိုအသုံးပြုရန်ခဲ့သော 2016 အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ, စဉ်အတွင်းရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုစည်းလုံးခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းသုံးစတူဒီယိုထဲကအလုပ်မလုပ်ခဲ့ - စပိန်ကနေအင်္ဂလိပ်စာနှင့်အင်္ဂလိပ်မှစပိန်မှ - ဝေဟင်မှ, တလျှောက်လုံး။ တစ်ကြိမ်မှာကျနော်တို့အကြောင်းကို 12 ဘာသာပြန်များတစ်ပြိုင်နက်သွားတာပေါ့ယုံကြည်ပါတယ်။ ၏သင်တန်း, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-စတူဒီယိုအခွက်တဆယ်, ဧည့်သည်များနှင့်တိုက်ရိုက် feeds တွေကိုအပြင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်လွှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ခုကွန်ရက်များပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ် simulcast ခဲ့သည်။ ကြောင့် Calrec console ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရန်, ငါအပိုဆောင်း I / O သို့မဟုတ် submixing အခြားထိန်းချုပ်မှုခန်းကိုမှီခိုအားထားစရာမလိုဘဲ (ကွဲပြားခြားနားသောရည်ညွှန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ) အနုတ်နဲ့လက်ငင်းရောမွှေ, ရှိသမျှအသံလမ်းကြောင်းနိုင်ခဲ့သည်။
မာရှယ်အီလက်ထရောနစ် USB 3.0 Converter သည်ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့၌အရည်အသွေးမြင့်ပြီးအဝေးထိန်း PC Broadcasting Solution ကိုပေးသည် - သြဂုတ်လ 10, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ audio အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ Calrec အသံ console တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ရောစပ် SJGolden - လှံ & Arrows စတူဒီယို ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် Univision ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-15
ယခင်: စတူဒီယိုအဒ်မင် International
နောက်တစ်ခု: လူသတ်သမား Sonic ဘိ Records ကိုစတင်ရန်မှ Composer Sebastian Robertson ကအတူအပေါင်းအဖေါ်များသီချင်းများ